ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲ့ခြင်း( မရရှိခြင်း)က ကလေးတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲ့ခြင်း( မရရှိခြင်း)က ကလေးတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ?
ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲ့ခြင်း( မရရှိခြင်း)က ကလေးတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ?
ချစ်ခင်ခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်း မရှိတာက ကလေးအပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ ချစ်ခင်တွယ်တာမှု လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရရှိဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ပါစင်နယ်ဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲခြင်းက ကလေးအား ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ ဆိုတာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့လိုအပ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်မှုကို မရရှိတဲ့အခါ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဖခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နွေးထွေးမှု အလုံအလာက် မရရှိဘူးဆိုရင် ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ဖို့ အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု အမျိုးမျိုးလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။သူတို့ဟာ ပွေ့ဖက်တာ၊ အသားချင်းထိတွေ့တာနှင့် စကားပြောဆိုမှုတွေ၊ အကြည့်ချင်းဆုံမှုတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံးက သူတို့ကို ဦးနှောက် ကျန်းမာစွာ ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ချစ်ခင်တွယ်တာမှု မရရှိခြင်းက ကလေးတွေကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိသလဲ?
ကလေးဘဝမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ငတ်မွတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို အောက်မှာ သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်
သင်ဟာ ကလေးဘဝတုန်းက အလုံအလောက် အာရုံစိုက်မခံခဲ့ရဘူးဆိုရင် သင့်မှာရှိလိမ့်မယ့် အခက်ခဲဆုံး relationship တစ်ခုက သင့်ကိုယ်သင်ပါပဲ။ တစ်ခါတရံ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အဆိုးဆုံး ရန်သူလို့တောင် သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ သင့်လုပ်ရပ်အတွက် အကြီးမားဆုံးဝေဖန်သူတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ဘဝဟာ သင့်ကိုယ်သင်နှင့် သင်ခံစားရလိုတဲ့အရာ အမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်နေရင် သင့်ကိုယ်သင်ချစ်ဖို့ သင်ယူရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လာပြီး အရာရာကို အကောင်းမြင်တဲ့နိုင်စွမ်းရှိလာပါမယ်။ သင့်ကိုယ်သင် စဉ်းစားပုံနှင့် အခြားသူတွေကို ဆက်ဆံပုံတွေ ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။
၂။ လူကြီးဘဝမှာ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေ
ဒုတိယအနေနဲ့ ကလေးဘဝဟာ သင့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ကျန်ရှိနေသေးသော ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် သက်တူ ရွယ်တူချင်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုမှုတွေကို သက်ရောက်စေသော အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂရုစိုက်မှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရရှိခဲ့ပါက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုတွေကို ခုခံကာကွယ်ခြင်း (သို့) အလွန်အကျွံ ကာကွယ်တဲ့သဘောထားက ကလေးဘဝမှာ ချစ်ခင်တွယ်တာမှု မရရှိခြင်းရဲ့ သရုပ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃။ self-esteem နိမ့်ကျခြင်း
ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ကင်းမဲ့ခြင်းဖြင့် ကလေးတွေကို သက်ရောက်စေသော နောက်တစ်နည်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု နည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်တွယ်တာမှု မရရှိခြင်းက ကလေးတွေကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ တန်ဖိုးထားခြင်းကနေ တားဆီးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကနဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မရရှိရင် လက်သင့်ခံနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖန်တီးဖို့ သူတို့အတွက် အရမ်းခက်ခဲစေပါတယ်။
ကလေးဘဝမှာ ငြင်းပယ်ခံရခြင်း(သို့) မိဘတွေဆီက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မခံရခြင်းက ကလေးတွေအား ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် မထိုက်တန်သလို ခံစားရ၇စေပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို self-esteem နိမ့်ကျမှုနှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာစေပါတယ်။ မလုံခြုံမှု၊ ရှုံးနိမ့်မှုနှင့်တူတဲ့ ခံစားချက်နှင့် self-destructive အပြုအမှုတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကျိုးဆက်တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။
တွယ်တာမှုရဲ့ လုံလုံလောက်လောက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်မှာ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ တွယ်တာမှုဆိုတာ ကလေးဘဝရဲ့ ပထမနှစ်အတွင်း ကလေးနှင့် စောင့်ရှောက်ပေးသူကြားက ဆက်သွယ်မှုအဆင့်ကို ရည်ညွန်းပါတယ်။
ချစ်ခင်တွယ်တာမှု မရရှိသော ကလေးတွေဟာ ကျန်းမာသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ မဖွံ့ဖြိုးတော့ပါဘူး။ ဒီလိုကလေးမျိုးဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အခြားသူတွေနဲ့ connecting လုပ်ဖို့ အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့် တန်ဖိုးထားမှု ကင်းမဲ့လာပါတယ်။ ထို့အပြင် လူတောမတိုးဘဲ အခြားသူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမှာ ကြောက်လာပါတယ်။
ဒါတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကလေးတွေဟာ မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေဆီမှ ချစ်ခင်တွယ်တာမှု ရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မရရှိရင်၊ လျစ်လျူရှုမှုရဲ့ အမှတ်အသားတွေက နက်ရှိုင်းပြီး တစ်သက်တာကြာရှည်နေပါလိမ့်မယ်။
Previous articleကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို တစ်ချိန်လုံးစိတ်ဓာတ်ကျစေသော စကားများ
Next articleဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ၅ ခု